Kaaliyaha Google wuxuu mar hore ku muujiyay muuqaalkiisa cusub Pixel 3 | Androidsis
Dhowr bilood waxaa jiray warar xan ah oo ku saabsan interface cusub oo loo adeegsan doono Kaaliyaha Google. Ugu dambeyntiina, wax yar un ka hor usbuuc ka hor ayaa la arki karay in is-dhexgalku uu ahaa mid dhab ah oo imtixaannadii ku jiray ayaa kol horeba bilaabmayay. Shirkaddu waxay sii waddaa inay tijaabiso is-dhexgal cusub oo yar oo dhex-dhexaad ah, kiiskan oo ku saabsan Pixel 3.
Isticmaalayaasha Pixel 3 waxay bilaabeen inay arkaan sida interface cusub u muuqato markay isticmaalayaan Kaaliyaha Google. Waa si sax ah is dhexgalka ka bilaabmaya in la tijaabiyo toddobaad ka hor. Marka shirkaddu waxay ka shaqeyneysaa soo-saarid noocan oo kale ah, oo ay tahay inay dhacdo muddo yar ka dib.
Qalabkan cusubi wuxuu qaadan doonaa boos yar oo shaashadda ah. Fikradda ayaa ah in markii la waco Kaaliyaha Google, sababtoo ah waxaan rabnaa wax, ma qabsan doono shaashadda oo dhan, sida ay hadda tahay. Halkii, waxay qaadaneysaa kaliya kalabar shaashadda taleefanka. Qaar badan waxay u noqon kartaa wax aad ugu raaxeysan in la isticmaalo.
Haddii adeegsadayaasha Pixel 3 iyo 3 XL ay mar horeba marin u heli karaan. Marka dadka isticmaala qaababka kale ee Google sidoo kale way awoodi doonaan inay adeegsadaan. In kasta oo aan ilaa hadda wax laga sheegin.
Illaa iyo hadda, Google lafteeda waxba kama aysan sheegin dhex-dhexaadintan cusub ee kaaliyaha Google. Shirkadda ayaa muddo naqshadaynaysay, haddana tallaabo ayay qaadayaan iyagoo ku samaynaya tijaabooyin taleefannadooda. Marka ma ahan inaan sugno waqti dheer ilaa ay ka gaarto dadka isticmaala Android.
Sikastaba xaalku ha ahaadee, waxaan u dheg nageyn doonnaa war bilow ee ka mid ah is-dhexgalka la cusboonaysiiyay. Isticmaalka Kaaliyaha Google ee taleefanka waa inuu u fududaadaa adeegsadayaasha qaabkan, oo aan yareyn. Markii wax badan laga ogaado bilaabitaankeeda, hadda ayaan kaaga warrami doonaa.
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Codsiyada Android » Kaaliyaha Google wuxuu tijaabiyaa qaabkiisa cusub Pixel 3